China Precision zvikamu zvekugadzirisa vagadziri uye vatengesi | Lingjun
Maitiro ekugadzirisa zvikamu ane zvakanyanya kuomarara zvinodiwa. Kusangwarira kushoma mukugadzirisa kuchaita kuti kukanganisa kwechishandiso chipfuure chiyero chekushivirira, chinoda kugadziridzwa, kana kuzivisa iyo isina chinhu, iyo inowedzera mutengo wekugadzira. Naizvozvo, ndezvipi zvinodikanwa zvekugadzirisa zvikamu zvinogona kutibatsira kuvandudza kugadzirwa kwakanaka.
Chechipiri, zvinodiwa zvemidziyo, hutsinye uye yakanaka kugadzirisa kunofanirwa kuitwa nemidziyo yekuita kwakasiyana. Sezvo rough machining process ndeyekucheka zvikamu zvakawanda zvezvisina chinhu, huwandu hukuru hwekushushikana kwemukati huchagadzirwa muworkpiece kana chiyero chekudya chakakura uye kucheka kwakakura, uye nzira yekupedzisa haigone kuitwa panguva ino. Kana iyo workpiece yapera mushure menguva, inofanirwa kushanda pane yakakura muchina chishandiso, kuitira kuti workpiece iwane yakakwirira chaiyo.
Chechitatu, kugadziridzwa kwezvikamu uye zvikamu zvinowanzobatanidza kurapwa kwepamusoro uye kurapwa kwekupisa, uye kurapwa kwepamusoro kunofanirwa kuiswa mushure mekugadzira michina. Uye mukugadzira machining, ukobvu hwehutete hwakatsetseka mushure mekurapa kwepamusoro hunofanirwa kutariswa. Kupisa kupisa ndeyekuita kwekucheka kwesimbi, saka inoda kuitwa pamberi pekugadzira. Izvo zviri pamusoro ndizvo zvishoma zvinodiwa zvinoda kuteverwa pakugadzirisa zvikamu.
Izvo zvinodiwa zvedimensional zvinofanirwa kugadziridzwa zvichinyatsoenderana neiyo geometric kushivirira zvinodiwa zvemadhirowa. Kunyangwe saizi yezvikamu zvakagadziriswa nebhizinesi hazvizove zvakangofanana nehukuru hwekudhirowa, saizi chaiyo iri mukati mekushivirira kweiyo theoretical size, uye chigadzirwa chakakodzera uye chikamu chinogona kushandiswa.
Precision machining ine matambudziko mazhinji ehunyanzvi, akawanda anopesvedzera zvinhu, huwandu hwakakura, kusimba kwekudyara kwakanyanya uye hunhu hwakasimba hwechigadzirwa.
1. Kugadziridza midziyo uye michina yekugadzira:kunyatsogadzira machining kunofanirwa kuve nehupamhi hwepamusoro, kusimba kwepamusoro, kugadzikana kwepamusoro uye otomatiki muchina maturusi, anoenderana maturusi edhaimondi, cubic nitride kusvetuka maturusi, mavhiri edhaimondi, cubic nitride kusvetuka mavhiri, uye inoenderana nehupamhi hwepamusoro, yakakwirira kusimba zvigadziriso nemimwe michina, kuitira chengetedza hutano hwekugadzirisa. Maturusi emuchina chaiwo ane humbowo hunoenderana anofanirwa kutariswa mune chaiyo machining. Mazhinji machining chaiwo anowanzo atanga kubva pakugadzira uye kugadzira ekupedzisira maturusi emuchina. Uye kugadzirisa maturusi anodiwa. Parizvino, iwo akateedzana akateedzana echokwadi machining muchina maturusi mashoma, uye batch haizove yakakura. Mutengo wezvishandiso zvemuchina wakakwira zvakanyanya, saka maodha akakosha anodiwa. Kana iripo chaiyo muchina maturusi asingakwanise kuzadzisa zvinodiwa. Kurongeka kwemachina kunogona kuvandudzwa nematekinoroji matanho kana kubhadharwa kwekukanganisa.
2. Kuonekwa: precision machining ine inoenderana yekuona tekinoroji, ichigadzira kubatanidzwa kwekugadzirisa uye kuona.
Pane nzira nhatu dzekuona nadzo machining:kuona pasina-line, kuona pa-line uye kuona pa-line. Kunze kwekutsvaga kunoreva kuti mushure mekugadzirisa, workpiece inotumirwa kukamuri yekuongorora kuti ionekwe; Munzvimbo yekuona zvinoreva kuti workpiece haina kuburutswa mushure mekugadziriswa pamushini wemuchina, uye inoonekwa ipapo. Kana chero dambudziko rawanikwa, zviri nyore kuti uwedzere kugadzirisa; Kuti udzore uye uise dynamic kukanganisa muripo, kutariswa kwepamhepo kunoitwa mukuita machining. Mhosho muripo chiyero chakakosha chekuvandudza machining kurongeka, iyo yakavakirwa pamuchina wekugadzira dhizaini yasvika pane imwe nhanho. Iko kukanganisa kunopatsanurwa, uye kukosha kwekukanganisa kunobhadharwa nemudziyo wekuripa chikanganiso. Pakati pavo, iyo static yekukanganisa muripo yakavakirwa pakukanganisa kukosha kwedivi kumberi, iyo inobhadharwa nehardware kana software panguva yekugadziriswa. Semuenzaniso, kukanganisa kwepitch yewaya yekufambisa yemuchina wemuchina inogona kubhadharwa nemutongi wekugadzirisa; Pahwaro hwekuonekwa kwe-on-line, iyo inochinja kukanganisa kukanganisa kunoitwa munguva chaiyo panguva yekugadzira. Iyo yekuona online uye yekubhadharisa tekinoroji yechaiyo machining ndiyo yakakosha tekinoroji yekuve nechokwadi chemhando yekugadzira machining. Iyo tekinoroji yekuona inosanganiswa mune zviri mukati meiyo chaiyo machining, uye iyo online yekuyera nzira inogona kuita kuti opareta awane matambudziko eiyo workpiece munguva uye adzorere kuCNC system.
3. Zvinhu zvakagadziriswa:izvo zvakagadziridzwa zvemachina machining zvine zvakaomesesa zvinodikanwa pakugadzirwa kwemakemikari, zvemuviri uye zvemichina zvimiro, makemikari zvivakwa uye zvigadziriso zvekugadzirisa, uye zvinofanirwa kunge zvakafanana mukugadzirwa, kugadzikana mukuita, uye isina macro uye diki defects mukati nekunze. Iyo inotarisirwa mhedzisiro yechaiyo machining inogona kuwanikwa chete kana zvinhu zvichisangana nezvinodiwa zvekuita.
Iyo nzira yekunyatsogadzirisa zvikamu zvekugadzirisa ine zvakanyanya kuomarara zvinodiwa. Kana paine kusava nehanya kushoma mukugadzirisa, chikanganiso cheworkpiece chinodarika chiyero chekushivirira, saka chinoda kudzokororwa, kana kuti chisina kuvharwa, icho chinowedzera zvakanyanya mutengo wekugadzira. Naizvozvo, ndezvipi zvinodikanwa zvekunyatso gadzirisa zvikamu, zvinogona kutibatsira kuvandudza kugadzirwa kwakanaka.
Chechipiri, zvinodiwa zvemidziyo, hutsinye uye kupedzisa machining kunofanirwa kushandisa akasiyana ekuita. Nekuti rough machining process ndeyekucheka zvikamu zvakawanda zveisina chinhu, iyo workpiece inoburitsa yakawanda yekushushikana kwemukati kana chiyero chekudya chakakura uye kudzika kwekucheka kwakakura, saka kupedzisa machining hakugone kuitwa panguva ino. Kana iyo workpiece yapera mushure meimwe nguva yenguva, inofanirwa kushanda pamushini wemuchina nehupamhi hwepamusoro, kuitira kuti workpiece iwane yakakwira chaiyo.
Chetatu, kugadziridzwa kwezvikamu zvakaringana kunowanzo kuve nemaitiro ekurapa kwepamusoro uye kurapwa kwekupisa, uye kurapwa kwepamusoro kunofanirwa kuiswa mushure mekugadzira machining. Uye mukuita kwekugadzirisa machining, ukobvu hwehutete hwakatsetseka mushure mekurapa kwepamusoro hunofanirwa kutariswa. Kurapa kwekupisa ndiko kuvandudza kushanda kwekucheka kwesimbi, saka inoda kuitwa musati machining. Izvi ndizvo zvinodikanwa zvekunyatsogadzirisa zvikamu.
Dimension zvinodiwa, zvinofanirwa kunyatso kutevedzera chimiro uye chinzvimbo chekushivirira zvinodiwa zvemadhirowa ekugadziriswa. Kunyange zvazvo zvikamu zvakaita sepizi mbiri zvisingafananidzi nekukura kwezvidhori, iwo chaiwo zviyero zvese zvakagadzirirwa zvigadzirwa mukati meiyo theoretical dimension kushivirira, uye ndizvo zvikamu zvinogona kushandiswa.
Zvakapfuura: Precision milling muchina zvikamu kugadzirisa
Zvinotevera: CNC lathe machining zvikamu
Cnc Precision Metal Processing Zvikamu